Bush Garden Studio Apartment - I-Airbnb
Aldgate, South Australia, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Angelo
U-Angelo Ungumbungazi ovelele
Le Studio Apartment ethandekayo ilungele imibhangqwana efuna ikhefu elincane, noma kulabo abafuna ukuhlala isikhathi eside. Ifanele ukuhlala kweholide noma ibhizinisi, uzozizwa usekhaya. Lindela ukuvakasha kwezinyoni eziningi zomdabu ezinhle, ama-possum nama-koala. Uzungezwe izindawo zokudlela eziseduze, amathilomu, izindawo ezikhanga izivakashi, izindawo zokudlela zewayini nezitolo eziwubukhazikhazi, wonakele ukuze uzikhethele. Sicela uqaphele: Ayibafanele abantu abanezinkinga zokuhamba. Olunye ulwazi ngezansi.
I-Studio itholakala endaweni ephansi kakhulu yekhaya lethu elingasegqumeni. Iqukethwe ngokuphelele ngokufinyelela kwangasese, kanye nomuzwa omusha, wesimanje. I-Studio inendawo evulekile yokuhlala, inekhishi, indawo yokudlela, indawo yokuphumula kanye negumbi lokulala konke okuthokozela ukubukwa kwengadi yasehlathini ukusuka phansi kuya kumafasitela ophahleni kanye nomnyango oshelelayo. Nethezeka kusofa wesikhumba futhi ubukele i-Netflix ku-55" Smart TV. Umbhede we-Queen unombhede olingana nenkosi ukuze uqinisekise ubusuku obuzolile nophathina wakho, futhi, uma uthanda ukulala, vele uvale amakhethini. Ikhishi lihlome ngokugcwele ngakho konke okudingayo ukuze upheke ukudla kwasekuseni okumnandi, kwasemini noma kwakusihlwa.Siqinisekisa ukuthi unokuningi ongakhetha kukho kwasekuseni, okunamathosti namasaka, amaqanda, ubhekeni notamatisi efrijini, kanye nama-cereal, itiye kanye ikhofi le-plunger. Kukhona njalo ubumnandi obumbalwa eduze kwakho ukuze nawe ukujabulele. I-Studio inendawo yokuhamba ngezinyawo nendlu yokugezela ewubukhazikhazi, enamanzi amaningi ashisayo nendawo yokubhucungwa ekhanda leshawa. Ungajabulela indawo enotshani, futhi kunezindawo zokuhlala ezimbalwa ngaphandle ukuze uphumule ngekhabethe kanye nencwadi.Singase sikunikeze umbhede womoya we-Queen high we-Queen velor kuze kufike izihambeli ezimbili ezengeziwe (izindleko ezengeziwe) - sicela usithumelele umyalezo ukuze sihlole.
I-Historical Aldgate Village iyingxenye enhle ye-Adelaide Hills. I-Village ine-FRED Eatery, izindawo zokudlela zama-Japanese kanye namaShayina, Ihhotela le-Aldgate Pump, i-Bubbas ne-Aldgate Pizza (ukulandwa nokudiliva), ibhikawozi, i-mini-supermarket kanye nezitolo ezimbalwa ze-quirky, okuhlanganisa nesitolo sethoyizi esimangalisayo ne-curios. Imizuzu embalwa emotweni yakho futhi use-Hahndorf yomlando, i-Bridgewater Mill, i-Stirling, i-Mount Lofty Botanical Gardens noma i-Mount Lofty Summit ehlinzeka ngokubukwa okumangalisayo kwe-Adelaide Plains. Kuzo zonke izindawo kukhona idolobhana elithandekayo nezindawo zokuhamba zasehlathini, kufaka phakathi i-Heysen Trail eseduze. Gqoka i-koala e-Cleland Conservation Park noma uvakashele i-Warrawong Wildlife Sanctuary nje ngomgwaqo.
Uma uqhelelene kancane, usendaweni enhle yohambo losuku oluya e-Barossa Valley naseSouthern Vales wineries (zombili imizuzu engama-50), ingasaphathwa eyezitolo eziningi ze-Adelaide Hills khona lapho emnyango wakho.
Futhi kuyimizuzu engama-20 kuphela ukuya e-Adelaide CBD kanye nemizuzu engama-35 ukuya esikhumulweni sezindiza.
Sikhona uma udinga, futhi ngaphezu kokujabula ukukusiza ngemibuzo yakho mayelana neSitudiyo noma indawo yasendaweni. Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi senza konke okusemandleni ethu ukukunikeza indawo oyidingayo ukuze uphumule futhi ujabulele ukuhlala kwakho.
Sikhona uma udinga, futhi ngaphezu kokujabula ukukusiza ngemibuzo yakho mayelana neSitudiyo noma indawo yasendaweni. Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi senza konke okusemandleni…
UAngelo Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Aldgate namaphethelo